को हुन् देउवापत्नी आरजु राणालाई हराएका नारदमुनी ? जो आज बन मन्त्री बन्दैछन् ! - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
को हुन् देउवापत्नी आरजु राणालाई हराएका नारदमुनी ? जो आज बन मन्त्री बन्दैछन् !
काठमााडौं । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा.आरजु राणालाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गर्ने नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने भएका छन् । उनलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
उनले कैलाली-५ बाट आरजु राणालाई भारी मत अन्तरले हराएका थिए । अहिले पनि नयाँ मन्त्री बनाइँदा सुदूरपश्चिमकै रानालाई वनमन्त्री बनाउन लागिएको हो ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ दुई कारणले कांग्रेसको बलियो आधार ईलाका मानिन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचनसहित धेरै निर्वाचनहरुमा कांग्रेस उम्मेदवारहरु नै जित्नुले यो क्षेत्रलाई कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो। तर २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नारदमुनि रानाले त्यसलाई नराम्रोसँग भत्काई दिए।
२७ हजार दुई सय दुई मत ल्याएका रानाले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा। आरजु राणा देउवलाई ४ हजार ८ सय ८० को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे। जुनकारण राष्ट्रिय राजनीतिमा नचिनिएका राना एकाएक सबैको ध्यान तान्न सफल भएका थिए।
हेभीवेटुको छवि बनाएकी आरजु राणालाई जितेर उनले अवसरको ढोका खोलेका थिए। उनी शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा निकै पछाडी परेको आदिवासी रानाथारु समुदायबाट त्यहाँसम्म पुगेका थिए। त्यो पनि गरिब किसानको छोराको हैसियतले उनीबाट यहाँका स्थानीयहरु ठूलो आश गरेर नै निर्वाचित गराएका थिए।
सांसद राना खेलकुद क्षेत्रमा पनि उत्तिकै शौकिन थिए। विभिन्न खेलकुद तथा प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइ हाल्ने उनी वि।स। २०४६ देखि २०४८ को अवधीमा तेकवान्डो, कराते र वक्सिङको च्याम्पिन भैसकेका थिए।
यूवा अवस्थादेखि विभिन्न रचनात्माक गतिविधि तथा वैचारिक कार्यक्रममा बस्न रुचाउने राना क्याम्पस अध्ययनकै क्रममा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थाले। फलतः वि।स। २०४५ सालमा तत्कालीन अखिल छैठौंबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरे। त्यसपछि वि।स। २०४८ सालदेखि नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन हुँदै टोल कमिटी, नगर कमिटी, जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा आए।
यसैबीच उनी वि।स। २०४६ सालको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा थुनामा समेत परेका थिए। सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उनीलगायत दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दिनभरी थुनामा राखेर मुक्त गरिएको थियो।
क्याम्पस अध्ययनताका मुलधारको राजनीतिमा होमिसकेका उनी वि।स। २०५४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाको उपमेयरको लागि उम्मेदवारी दिए। उक्त निर्वाचनमा उनले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मनिराम देवललाई भारी मतान्तरले पराजित गरे। हाल उनी नेकपा एमालेका केन्दि«य सदस्य रहेका छन्।
तिनै आरजु राणालाई पराजित गर्ने नारदमुनी राना मन्त्री बन्ने भएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई वनमन्त्री बनाउन लागिएको हो।
यसअघि वन मन्त्रीमा सुदूरपश्चिमकै प्रेम आले रहेका थिए।